प्राग भन्दा राम्रो बियर: एक सिंहावलोकन, वर्णन र ग्राहक समीक्षा
यो चेक गणतन्त्र मा बियर राष्ट्रिय संस्कृति को आधार छ कि ज्ञात छ। कुनै पनि मामला मा, यो कसैले पेय पदार्थ intoxicating को प्रयोग बिना आफ्नो फुर्सदको समय यहाँ बिताएको कल्पना गर्न गाह्रो छ। प्राग बियर बारहरू - विश्व मा सबै भन्दा राम्रो। त्यसैले शहर बासिन्दा मात्र होइन तर पनि पर्यटकहरु विचार गर्नुहोस्।
चेक गणतन्त्र को राजधानी भ्रमण र यसको पौराणिक पेय असम्भव छ को सबै लाभ मूल्याङ्कन गर्न। बियर जताततै छ - एक विस्तृत श्रृंखला मा प्राग भन्दा राम्रो बियर प्रस्ताव। hops देखि पिउन यहाँ दिन वा रात को कुनै पनि समयमा सबै पिउन। यसको न्यायाधीशहरूले लामो, प्राग मा सबै भन्दा राम्रो बियर प्रदान गर्दछ जो बिहान चेक बियर, बीच कहिल्यै टाउको दुखाइ छ पाएका छन्।
कुनै भ्रमण राजधानी को मुख्य आकर्षण गर्न भ्रमण बिना पूर्ण छ। प्रस्ताव पर्यटकहरु उछिन्ने गाइड शहर को धेरै प्रकृति अनुभव गर्न प्राग भन्दा राम्रो बियर भ्रमण गर्न। हामी चेक राजधानी को इतिहास प्रसिद्ध पेय को इतिहास संग चरण मा छ भनेर भन्न सकिन्छ। लेख प्राग भन्दा राम्रो बियर को एक सिंहावलोकन प्रदान गर्दछ।
पहिलो भठ्ठी को Czechs द्वारा 1087 मा खोलिएको थियो। र अब, चेक intoxicating पेय को लगभग एक हजार वर्ष शान्त, मापन, राम्रो-गर्दा अनि देश मा जीवन को सामाग्री समृद्धि प्रतिनिधित्व गर्छ। यो संरक्षक Brewers संचार छ कि ज्ञात छ। Vaclav। नयाँ उत्पादन खोल्ने वा नयाँ प्रजातिहरू को उत्पादन सुरु गरेर, मास्टर प्रार्थना गर्न बन्द र उहाँको आशिष् लागि सोध्छन्।
XIII-XV शताब्दीयौंदेखि मा चेक brewers सबैभन्दा कठिन समयमा अनुभव गरेका छन्। बियर सरकार बिरुवाहरु दोश्रो देखि एक माइल भन्दा कम निर्माण गर्न निषेध गरिएको थियो जो अनुसार निर्णय गर्ने थियो कि यति लोकप्रिय भएको छ। उर्दी उल्लङ्घन अचाक्ली सजाय दिनुभयो। काडा र कम गुणस्तर उत्पादनहरु उत्पादन brewers। टेस्टिङ विभिन्न बियर नियमित बाहिर छन्। तपाईंले एक पिउन वा अन्य निर्माता को tasters को आवश्यकताहरू पूरा गर्दैन भने, यो क्षेत्र हालिएको थियो, र "लेखक" छडीले कुटपिट भएको थियो।
विगत शताब्दीयौंदेखि बियर को चेक गणतन्त्र को आफ्नो आदरणीय स्थिति प्रतीक robbed छैन। राजधानी मा, बारहरू र रेस्टुरेन्ट हरेक कुना मा देख्न सकिन्छ। तिनीहरूको संख्या सबै भन्दा राम्रो बियर छ जो गाइड, कि त ठूलो छ प्राग रेस्टुरेन्ट मा, अवश्य छ। यात्री र पर्यटकहरूले अनुभव कसरी अनुभवहीन आफ्नो उपस्थिति Orient मदत गर्नेछ।
प्राग बियर पबहरूमा: सबै भन्दा राम्रो को र्याङ्किङ्ग
चेक राजधानी मा बियर बारहरू र रेस्टुरेन्ट, एक मजाक बियर प्रेमीहरूको, जस्तै ग्लास र यो intoxicating पेय संग बुलबुले धेरै रूपमा। कुरा सम्पूर्ण गुन नमान्ने तर्क मानिन्छ सबै भन्दा राम्रो प्रतिष्ठानबाट को जो बारेमा। पब प्राग एक विस्तृत विविधता मा प्रस्तुत। केही तिनीहरूलाई पछि एक लामो इतिहास छ, अन्य ठाउँहरूमा छैन त लामो पहिले खुला छन्। कुनै पनि विशेष मा विशेषज्ञता बारहरू भाग बियर को ब्रान्ड, अन्य ठाउँमा, आगंतुकों प्रजातिहरू र पेय intoxicating को प्रकार को दर्जनौं प्रस्ताव छन्। तर लगभग हरेक त्यहाँ यो प्रतियोगिता बाट distinguishes जो एक निश्चित हाइलाइट छ।
चेक राजधानी मा के स्थानहरू सबै भन्दा राम्रो हो? तपाईं ध्यान गर्नुपर्छ जो प्राग बियर, यस लेखमा पछि प्रस्तुत। मुख्य चयन मापदण्ड उत्कृष्ट गुणस्तर को बियर बार, साथै असामान्य र केही उल्लेखनीय वातावरणमा उपस्थिति छ।
"हामी दारा" (रेष्टुरेन्ट-भठ्ठी)
समीक्षा unanimously यो सुविधा को शीर्ष-8 सूची बनाउन "प्राग सर्वश्रेष्ठ बियर।" "के Vleck" 15 औं शताब्दीमा खोल्न सबै भन्दा प्रसिद्ध प्राग बियर-भठ्ठी छ। पर्यटकहरू एक विशेष बाक्लो गाढा बियर, wherein कर्मेल आमन्त्रित गरिन्छ। यो पिउन धेरै समीक्षा अनुसार indifferent रहन बस असम्भव छ!
रेस्टुरेन्ट आश्चर्य छैन केवल एक स्टाइलिश भित्री मा कोठा, तर नाम "बोल्ने" :. "सूटकेस", "लिवर ससेज", "ठूलो", आदि बियर साथै अतिथि आश्चर्यजनक स्वादिष्ट चेक भोजन आनन्द उठाउन सक्छौं। बगैंचामा एक दल नाटकहरु स्थानहरूलाई। रेस्टुरेन्ट गएर एक अविस्मरणीय अनुभव सुनिश्चित गर्दछ। को पोल मा दर्जा स्थानहरू: प्राग भन्दा राम्रो बियर को आठ मा आठौं ठाउँ।
"सेन्ट थोमस" (बियर)
यो पब भिक्षुहरूले, Augustinians द्वारा 1352 मा खोलिएको थियो। यो पेय टेस्टिङ, जो तिनीहरूले पनि उत्पादन को ठाउँ भयो। बियर एक गाढा vaulted तहखाने जसको इतिहास अत्यन्तै रोचक छ। यो बियर पिउन गीतहरू गाउन र चेक गणतन्त्र को धेरै प्रमुख तथ्याङ्कले कुरा मन पराएका कि यहाँ छ। शताब्दीयौंदेखि, यो पब को "प्रगतिशील सोच" को केन्द्र हो। जादू तहखाने अतिथि फेरि र फेरि यहाँ आउन बनाउँछ।
अनुभवी पर्यटकहरू सल्लाह - यो बियर "थोमस" एक मग "Brannika" आदेश पक्का हुन छ। यस पेय को स्वाद र सुगन्ध तपाईं पूर्णतया पब को रहस्यमय र रोमाञ्चकारी माहौल रमाइलो गर्न अनुमति दिन्छ। स्वतन्त्र सर्वेक्षण अनुसार, सम्पत्ति स्तर मा सातौं स्थानमा छ।
पब "द Chalice"
यो रेस्टुरेन्ट-पब प्राग जाँदै बिना पनि भ्रमण गर्न सम्भव छ। कसरी? "राम्रो सैनिक Schweik को साहसिक", जे Hasek गरेर अमर उपन्यास पढ्न Suffice। संगीत, ओक तालिका, Franz यूसुफ म, अवधि फर्नीचर को एक पोर्ट्रेट र, पाठ्यक्रम, उत्कृष्ट बियर को उपस्थिति - सबै क्लासिक को प्रसिद्ध काम मा वर्णन। यो पब deservedly एक पर्यटक छलफल छ - आदिवासी मान्छे विरलै किनभने स्थापना को उच्च लागत को यहाँ आउनुहोस्। बियर स्वतन्त्र सर्वेक्षण को स्तर मा छैटौं स्थानमा लाग्छ।
र यो बियर मा, विपरीत, लगभग कहिल्यै विदेशीहरू मा। तर यहाँ हामी निश्चय आउन पर्छ, पुरानो प्राग आत्मा महसुस गर्न, अनुभवी पर्यटकहरु सल्लाह। यहाँ तपाईं आधा-लीटर मग "Smihovskogo" वा अन्य बियर आदेश गर्न सक्छन्, लामो टेबल संस्थाहरू मध्ये एक मा बस्न र पूर्णतया सान्त्वना आनन्द र बियर को शान्त। यहाँ तपाईँले महसुस गर्न सक्ने समय बन्द भएको छ र तपाईं विगतमा थिए। रेस्टुरेन्ट स्तर मा पाँचौ स्थानमा ओगटेको छ।
"मा सुनौलो बाघ"
यो संस्थाले जानिन्छ, अन्य कुराहरु, आफ्नो आगंतुकों बनाउँछ। 1994 मा, रेस्टुरेन्ट Vaclav Havel र द्वारा भ्रमण थियो बिल क्लिंटन। यो खाने छ पिउने र प्रमुख सार्वजनिक तथ्याङ्कले, इतिहास छलफल, दुर्भाग्यवश, मौन भन्ने तथ्यलाई। तर हामीलाई थाहा छ ठीकै "प्राग भन्दा राम्रो बियर पब" को रूपमा वर्गीकृत छ जो संस्थाले आफ्नो बैठक, पछि, दुई देशहरू बीच राजनीतिक सम्बन्ध थप फलदायी भएका छन् कि। तर बियर र अझै पनि फेला पार्न निःशुल्क स्थान एकदम समस्याग्रस्त छ।
प्राग भ्रमण, म "सुनौलो बाघ" प्रसिद्ध Luciano Pavarotti मा Pilsner बियर पिउन मौका कहिल्यै छुट्यो। कारण संस्थाले चिरपरिचित व्यक्ति, ठाउँ को पक्षमा उठाउँछ भन्ने तथ्यलाई गर्न, यहाँ राम्रो अग्रिम बुक गर्न छ। अफवाह यो छ भनेर भन्दा पाउन सक्नुहुन्छ स्थानीय बियर संग लामो टेबल को एक समयमा चेक राष्ट्रपति को।
शुरुआती पब आउने गर्न सल्लाह गर्दै छन्, निश्चित एक मग "Pilsner Urquell" आदेश। समीक्षा अनुसार, यो पेय उत्कृष्ट स्वाद, छ अचम्मको। स्वतन्त्र मतदान संस्था को स्तर मा चौथो स्थानमा छ।
एक पटक यो केवल कुलीन गर्न बारेमा "Pivovarsky घर" ज्ञात थियो। पछिल्लो केही वर्ष, संस्था बियर प्रेमीहरूको बीच अधिक लोकप्रिय भएको छ। को भठ्ठी को मालिक थप विविध दायरा कसरी बनाउने र अतिथि के केही सस्ता माल चकित बारेमा निरन्तर चिन्तित हुनुहुन्छ।
सबैभन्दा असामान्य स्वाद "kavovogo बियर" र एक शैम्पेन-बियर छलफल। मात्र नकारात्मक ठाउँमा निरंतर भीडभाड छ - फेला ठाउँ खाली मात्र राति दस पछि सम्भव छ। स्वतन्त्र समीक्षा स्तर मा तेस्रो स्थानमा संस्थाले फिर्ता लिया।
"द संरक्षक" (रेस्टुरा-पब)
लामो समय को लागि रेस्टुरेन्ट "द संरक्षक" भ्रमण गर्न अवसर पनि कुलीन को अवसर थियो। यो सम्मान को अतिथि बीच Tiho Brage, विली बै्रन्ट, राजकुमारी डायना, अलेक्जेन्डर Dubcek, साथै जर्मनी र चेकोस्लोभाकिया धेरै उच्च र्याङ्किङ्ग अधिकारीहरु थिए ज्ञात छ।
आज बियर कुनै पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। समीक्षा सेवा संस्थाले downright सिद्ध कुराकानी भनेर संकेत गर्छ। को आगन्तुक एक तीतो-मीठो "Budweiser" सम्राट् फर्डिनान्ड आई एक मिठाई मसालेदार सुगन्ध संग यो MALT पेय को समय देखि ज्ञात प्रस्ताव गर्न निश्चित यहाँ Waiters सूचीबद्ध छ "रेकर्ड को गिनीज बुक।" संस्था को स्तर मा दोश्रो सबै भन्दा ठूलो छ।
रेस्टुरेन्ट-पब "पुरानो Pani"
प्राग को नागरिक को लागि मनोरञ्जनको एक मनपर्ने स्थान - मूल्याङ्कन को नेता ठ्याक्कै यो स्थान छ। यहाँ विदेशीहरू दुर्लभ zahazhivayut। यो अपवाद मित्र Czechs गर्नेहरूलाई पर्यटकहरु छन् - नागरिक यो सरल, सस्तो, आरामदायक पब तिनीहरूलाई ल्याउन वा आफैलाई भ्रमण गर्न सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ। रेस्टुरेन्ट, ठूलो स्वाद संग सजाया intoxicating पेय पदार्थ पिउने सबै नियम छ।
पेन्सिलमा ड्रप छैन यसको घनत्व छ जो एक फोम, गठन गर्ने ताकि बियर हालिएको छ। रेस्टुरेन्टमा बार र एक उत्कृष्ट रेस्टुरेन्ट छ। सामान्यतया यहाँ आउन प्रेमीहरूको Krusovice, मखमली, प्रकाश Staropramen, Gambrinus। आफ्नो मनपर्ने पेय यहाँ सेवा को लागि: को Cranberry सस अन्तर्गत हिरन को मासु, आलु पकौडी, पोर्क र बन्दागोभी। को साँझमा जो अन्तर्गत आगंतुकों मनपर्ने संगीत, नृत्य गर्न। अन्य कुराहरु, संस्था "पुरानो Pani" तपाईं सधैं रहन सक्छ जहाँ होटल, पनि अझै पनि छ।
बियर स्नान को लाभ
चेक बियर मात्र एक पेय छ। यो पनि नुहाउने! चेक राजधानी मा पर्यटक मुड उठाउनु intoxicating पेय को मात्र होइन परम्परागत कप, तर पनि फोम स्पा उपचार, जो बियर को आन्तरिक र बाह्य प्रयोग संयोजन हो।
धेरै बियर स्नान ठूलो आनन्द विचार भन्ने तथ्यलाई बाहेक, तिनीहरू पनि युवा विस्तार र सौन्दर्य पुनर्स्थापना को एक उत्कृष्ट माध्यम हो। यो पनि एक शक्तिशाली चिकित्सकीय प्रभाव छ भनेर विश्वास गरिएको छ। यो जटिल प्रक्रियागत आफूलाई बाहेक समावेश, अझै पनि बियर को स्नान र आराम को मालिश, कस्मेटिक wraps, र को पाठ्यक्रम, चिकित्सा एउटा सुखद पूरक रूपमा बियर को प्रयोग।
ओक बैरल गरम intoxicating मिश्रण बियर को एक प्राकृतिक निकाल्ने (बियर को निर्वाचकगण भरिएको छ खमीर, hops, MALT)। यस फन्ट मा रोगी 20 मिनेट बिताउँछन्। यो समयमा, मांसपेशिहरु, आराम जोडहरुको अप न्यानो, त्यहाँ आन्तरिक अङ्गहरू, छाला सफाई, कपाल र नङ बलियो को रहस्यवादी एक बहाली छ। एकदम वर्णन विश्राम को एक पूर्ण पाठ्यक्रम प्रतिरक्षा बढाउँछ।
प्राग बियर स्पा: कहाँ गर्ने?
बियर थेरापी Romanom Vokaty स्थापित भएको थियो - Marianske Lazne, को balneology र भौतिक चिकित्सा मा एक विशेषज्ञ। 2006 मा भठ्ठी "Chodovar" मा लागू यसको स्पा परियोजना भएको छ। रिकभरी एउटा नयाँ प्रकारको को Czechs र विदेशी पर्यटकहरु संग धेरै खुसी भए। विधि चाँडै चेक गणतन्त्र मार्फत फैलियो। प्राग स्वस्थ बियर स्नान केही प्रत्येक जो आगंतुकों आकर्षित, एक विशेष हाइलाइट छ "Lazne,", हुन सक्छ:
स्पा "बियर Lazne, सडक मा» BBB। Machaut, 5, पुरानो टाउन। घुमाउरो डिजाइनमा एक hydromassage टब सँगसँगै छ जो herein Bier.Bottich.Bad पेटेंट प्रविधि प्रयोग प्रक्रियाहरु पूरा मा। मूल्य प्रक्रिया 1368 crowns।
को बियर स्पा सेन्टर "बर्नार्ड" (प्राग, सेन्ट। टिन, 644/10 को केन्द्र) मा। पौडी बाहेक, विश्राम जटिल पनि विशेष गरम ओछ्यानमा आराम समावेश छ। एक स्मारिका रूपमा सत्र समयमा अतिथि बोतल "बर्नार्ड" एक foamy पेय विज्ञापन libitum मा प्रयोग गर्न सकिन्छ दिनुहोस्। 2780 CZK: प्रक्रिया को मूल्य।
बियर स्नान स्पा Beerland, सडक मा प्रबन्ध छन् जो। संचालन कार्यहरू, 658/9। अतिथिहरूको एक हजार लिटर को ओक टब मात्रा मा एक पौडनु, पिउन बियर "Krusovice" र चिमनी द्वारा आराम प्रस्ताव छन्। 1600 CZK: प्रक्रिया को मूल्य।
"Lazne, प्रमिला" (सडक। Dejvickb, 255/18) मा। यहाँ हट टब वा मेपल रोयलओएक 1000 एल पानी मात्रा मा, हालिएको छ टी = 35-38 डिग्री गाढा बियर, बियर खमीर र जमीन प्राकृतिक सामाग्री चयन MALT र hops को किसिमहरु एक निश्चित अनुपात मा मिश्रित छन् थपियो। 1600 CZK: प्रक्रिया को मूल्य।
चेक राजधानी मा Foamy पेय सबैतिर बेचिन्छ। को रेस्टुरेन्ट को विशाल संख्या तपाईंले एक उत्कृष्ट चेक बियर स्वाद भएको, प्रसिद्ध स्वाद गर्न सक्छन्। प्रत्येक प्राग पब असामान्य छ, यसको आफ्नै इतिहास, यसको आफ्नै भन्सार, आफ्नो आकर्षण, यसको उत्कृष्ट बियर र यसको अधीनमा को मूल तरिका संग प्रत्येक। र निस्सन्देह, चेक राजधानी को प्रतिष्ठानबाट पिउने प्रत्येक प्राग भन्दा राम्रो बियर तिनलाई को बोल्ने यसको प्रशंसक छ।
रेस्टुरेन्ट "रबिन" (एकाटेरिनबर्ग): सिंहावलोकन, मेनु र ग्राहक समीक्षा
क्याफे "Rhinoceros" बेलग्रेड: ठेगाना र समीक्षा
"निहाल star name" (रेस्टुरेन्ट): ठेगाना, मेनु, समीक्षा। मास्को मा चिनियाँ रेस्टुरेन्ट
बार "कोयोट कुरूप", कीव ठेगाना मेनु
आर्मेनियाली रेस्टुरेन्ट - स्वाद र aromas को richness
भारतीय नाम र तिनीहरूको अर्थ
एक Swimsuit आफैलाई कसरी सी गर्न?
गुलाबी सामन साथ केक। नुस्खा
अभिनेता Alexei Buldakov: जीवनी, Filmography, व्यक्तिगत जीवन
Montale को aromas: समीक्षा, वर्णन, मूल्यहरू
हाम्रो क्षेत्र को पानी धन। साइबेरिया र क्रास्नायार्स्क क्षेत्र को संसाधन
साइट लागि पाठ: बिक्री को लागि एक उपकरण वा खोज इन्जिन लागि "खाना"?